तपाईको आजको राशिफल - Sankalpa Khabar
८ मंसिर ०७:०८
२०७८ मंसिर ८ गते, बुधवार, २४ नोभेम्बर २०२१। मार्ग कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथि। पुनर्वशु नक्षत्र, १४ः०० बजेदेखि तिष्य।
खर्चिलो काम थाल्नाले समस्या पर्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
१८ मंसिर १५:१६
अध्यक्षका उम्मेदवार रावलको नाम सदस्यमा !
१४ मंसिर ०८:०९
कुन बैंकले कति लाभांश घोषणा गरे ?
१८ मंसिर १६:०६
१५ मंसिर ११:१९
छैन रेल चलाउने सुरसार
१८ मंसिर ०७:५२
१४ मंसिर ०९:४७